Octuor vocal de Madagascar: manam-peomanga hanandratana ny hakanton’ny mozika | NewsMada
Octuor vocal de Madagascar: manam-peomanga hanandratana ny hakanton’ny mozika
Raha ny tontolon’ny mozika klasika no resahina, manana tanora manan-talenta isika ary tsy mitsanga-menatra. Anisan’izany ny Octuor vocal de Madagascar, nijoro tsy ela akory izay, saingy manana vina tsara amin’ny fanandratana ny mozika.
Octuor vocal de Madagascar, araka izany anarana izany, tarika miavaka amin’ny fananana feomanga ary ahitana mpikambana valo mianadahy ny OVM, fanafohezana io anarana io. Tsy iza izy ireo fa i Laëtitia Pascale, i Antema Koely, Andriantsoavina Michou, i Andry Nantenaina, Randriamananjara Safidy, Razafitrimo Steven, Rajaonah Harizo ary Andriantsoavina Mino.
Niorina ny volana jona lasa teo ny OVM ary tanora notsongaina tamina fiangonana maromaro, eny Itaosy, izy ireo. Tsy kisendrasendra ny nijoroan’ny tarika fa fifanojoan’ny tanjona sy ny fomba fijerin’ny mpikambana tsirairay: ny fanandratana sy ny fanatsarana hatrany ny mozika eto Madagasikara.
Ny feomanga no anisan’ny mampisongadina ny Octuor vocal de Madagascar. Araka izany, efa voarindra sy miavaka tsara ny anjara raisin’ny mpikambana tsirairay ka ao ny “soprano” (miisa roa izy ireo), ny “alto”, ny “contre-ténor”, ny “ténor” (miisa telo) ary ny manana feo “baryton”.
Manao ny gadona rehetra ny OVM, araka ny fanazavana hatrany. Na vao haingana aza ny nijoroan’ny tarika, efa maromaro ny tetikasa tanterahiny, amin’izao fotoana izao. Anisan’izany ny fanomanana ny fandraisam-peo ireo hirany, izay hivoaka tsy ho ela, araka ny fampanantenana hatrany.
Mialoha izany, fandaharam-potoana lehibe indrindra ny seho voalohany, hotanterahin’ny OVM, rahampitso hariva ao amin’ny Villa Sanni Sahalemaka Ambaniala Itaosy. Hiompana tanteraka amin’ny mozika klasika ny hira hoentin’izy ireo, araka ny lohahevitra, “Récital d’airs d’opéra”. Notsongaina manokana hohiraina ireo sanganasan’ny mpanoratra hira klasika fanta-daza. Marihina fa maimaimpoana ny seho, saingy misy ny fanasana manokana, alaina any amin’ny mpikambana.